आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको साधना लघुवित्तले बढायो ६९ % नाफा
जेठ ५, काठमाडौं । सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा रहेको साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म रू. १ करोड ९२ लाखभन्दा बढी नाफा गरेको छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको नाफा ६९ प्रतिशत बढी भएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म उक्त कम्पनीले रू. १ करोड १४ लाखभन्दा बढी नाफा गरेको थियो ।हाल रू. १४ करोड ७० लाख चुक्तापूँजी रहेको उक्त कम्पनीले रू. ७ करोड ७ लाख ८० हजार बराबरको आईपीओ जारी गर्न गत फागुन २७ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको छ ।
आईपीओ पश्चात उक्त कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २१ करोड बढी पुग्नेछ । गत पुसमा सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभामार्फत उक्त कम्पनीले आईपीओ पश्चात ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिसकेको छ ।
यस वर्ष कम्पनीको जगेडा कोष रकम गत वर्षको तुलनामा २५१ प्रतिशत बढी कायम भएको छ । गत वर्ष यस अवधिसम्म रू. १ करोड १४ लाखभन्दा बढी रहेको उक्त कम्पनीको जगेडा कोष रकम यस वर्ष सोहि अवधिसम्म रू. ४ करोड २ लाखभन्दा बढी कायम भएको छ ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट गत वर्षभन्दा ९५ दशमलव ५८ प्रतिशत बढी रू. १ अर्ब १७ करोड २४ लाखभन्दा बढी रकम कर्जा सापटी लिएर उक्त कम्पनीले रू. १ अर्ब ७० करोड ५२ लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
उक्त कम्पनीले यस वर्ष गत वर्षभन्दा १०९ प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस वर्ष कम्पनीले गत वर्षभन्दा १५६ दशमलव ६४ प्रतिशत बढी अर्थात् रू. ४३ करोड १६ लाखभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको छ ।
गत वर्ष यस अवधिसम्म शून्य दशमलव शून्य २ रहेको उक्त कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात यस वर्ष १ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त कम्पनीले यस वर्ष रू. १ करोड ७९ लाख ९० हजार खराब कर्जा उठाएको छ । गत वर्ष रू. ५२ लाख ६७ हजार मात्र यस अवधिमा कम्पनीले यो कर्जा उठाएको थियो ।